गणतन्त्रमा न्यायको चक्रब्यूह - Suvham News
Jay Prakash Ananda—-
मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो । बिशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो । म पनि मंत्री भए । मेरो दुर्भाग्य, म फेरी संबैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भए । प्रम डा. बाबुराम भट्टराई ले मलाई मनोनित गर्नु भएको थियो । प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनु हुन्थ्यो । मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थियो । न्यायाधिश तप बहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा । मेरो समेतको उपस्थितिमा संबैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भैसकेको थियो । कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन । मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो । तर, मेरो निम्ति सहज रहेन । बिना मौसमको बाँसुरी बजेको झै अंग्रेजी समाचार दैनिक “दी हिमालयन टाईम्स” को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो । समाचारको सार थियो; “जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ र यिनै जेपी गुप्तासंग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश संबैधानिक परिषदमा बस्नु परेको छ । यस बारे प्रधान न्यायाधिश प्रधान मंत्रीसंग आफ्नो असंतुष्टी जनाउनु भएको छ ।” मैले यस समाचारका वारेमा “दी हिमालयन टाईम्स” मा बुझे, प्रघान न्यायाधिशका प्रेस सल्लाहकार थिए एक जना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए ।
खिलराज रेग्मी जी ले मेरो मुद्दा न्यायाधिश सुशीला कार्कीको डिविजन बेंचमा तोक्नु भयो । सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधिशले कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ? यस प्रश्नमा दुबै पक्षका बीच छलफल हुन नपाउँदै न्या. सुशीला जी ले शुरू देखि नै पुन: मुद्दा हेर्ने आदेश दिनु भयो । बास्तवमा मेरा मुद्दा सुशीला जी ले हेर्नु उचित थिएन । मेरो र न्यायाधिश हुनु पहिले सुशीला जी को राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँ की पति दुर्गा सुबेदीसंगको मेरो राजनीतिक बैरभावका कारणले मैले तेसो भनेको थिए । सुशीला जी न्यायाधिश हुनुभन्दा केही पहिले कांतिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनु भएको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाईएकाहरूको बडो गैर न्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रकृयाबाट फैसला गरी जेल पठाउनु पर्ने लेख्नु भयो । यस्तो गैर न्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधिश भएर सोही मुद्दा हेर्नु पर्दा ‘प्रिजीड्यूस’ हुन्छ । यसर्थ, सुशीला जी ले यो मुद्दा हेर्नु हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध सहितको जिकीर थियो ।
मुद्दा किन न हेर्नु ? उहाँले भन्नु भयो; म “प्रतिवादीसंग उहाँको हाडनाता छैन । फेरी जय प्रकाश ले भनेर के नै हुन्छ र ? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।” म संग कुनै उपाय थिएन । शिर निहुँराएर मैलै उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरे । नागरिक दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सव थियो । सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा संचार मंत्री भएकोले पनि होला, म पनि आमन्त्रित थिए । मेरो मुद्दामा शुरू देखिनै जोडिनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नु भयो; “सुशीला जी ले किमार्थ पनि तपाईलाई न्याय गर्नु हुन्न् । तपाईलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीला जी लाई जिम्मा दिईएको हो। ” तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बहिर्याउने कुनै उपाय म संग थिएन । जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले बिशेष अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याई दिनु भयो । कुनै पनि बहालबाला मंत्रीलाई जेल पुर्याउने श्रेय उहाँले लिनु भयो । त्यस दिन विवेक की देवी भनी अपेक्षित सुशीला जी प्रतिशोध की चण्डी बन्नु भयो ।
Prevयो नै राष्ट्रघात हो, आत्मघात हो , सन्तानघात हो, मानवताको अपमान हो, आफैले आफूमाथि गरेको अन्याय हो ।
Nextअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका परिप्रेक्ष्यमा नेपालीजनले भुल्नै हुँदैन कि :